Mety ho toa tsotra izany, fa raha hikajiana ny tahan'ny Churn ho an'ny lozisialy ho serivisy dia misy nuansa vitsivitsy. Tsotra, ny Churn Rate dia ny isan'ny mpanjifa nijanona nizara ny isan'ny mpanjifa tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana refesina… nisaina ho isan-jato. Ity ny Formula Churn Rate:
Tsy dia zavatra ratsy foana i Churn… orinasa SaaS maro no mampiasa churn hanoloana ireo mpiserasera tsy mahasoa amin'ny mahasoa kokoa. Na dia mety manana tahan'ny fikororohana ratsy ianao amin'ireto toe-javatra ireto, dia hahasoa kokoa ny orinasanao amin'ny farany. Fantatra amin'ny hoe Ny karama azo isambolana isam-bolana miverimberina (MRR), izay ny karamanao fanampiny amin'ny mpanjifa vaovao sy misy dia mihoatra ny vola miditra azonao noho ny fidinana sy ny fanafoanana.